Helidda waxa ugu Badan Wabsaydkan | LawHelpMN.org
Waa maxay LawHelpMN.org?
LawHelpMN.org waxay bixisaa jawaabaha su’aalaha sharci, ciwaanada xidhiidhka ee xafiisyada kaalmada sharci, lifaaqyada dhismayaasha maxkamadaha iyo ururada bulshada deegaan.
Haddii aad adeegsatid biriintar (daabace), waxay noqon karta caawin buuxda in la daabaco nuqul boggan ah sidaa darteed waxaad tix raaci kartaa meesha aad aadaysid.
Su’aalaha Soo Noqnoqda
· Sideen u heli Kaalmo Sharci?
· Sideen u heli xog sharci?
· Sideen u adeegsadaa qaybta “Raadinta”?
· Nooca Caawinta
· Nidaamyada dakhliga
· Ma heli karaa caawin haddii dakhligaygu ka badanyahay nidaamyada?
· Kooxaha Gaarka ah
Sideen u heli Kaalmo Sharci?
Haddii aad doonaysid adeegyada sharci oo bilaash ah ama qiimo jaban, riix “Hel Kaalmo Sharci” ee dhanka sare ee bog kasta. Tani waxay kuu wadi doontaa bogga “Raadinta”, kaasoo ku waydiin doona su’aalo labo ah:
· Xageed ku nooshahay? Si aad uga jawaabtid su’aashan, gali sib koodhka (lambarka xaafadda) ama dooro wadanka “liiska taxan”.
· Dhibaatooyin sharci oo noocee ah ayaa kula soo darsay? Si aad uga jawaabtid su’aashan, marka hore ka dooro mawduuc liiska dhanka bidix ku qoran. Tan waxay samayn doontaa liis ah “mawduuc hoosaad” oo ka muuqan dhanka midig. Tusaale ahaan, waxaad dooran kartaa “Sharciga Qoyska” ee liiska dhanka bidix, ka dibna dooro mawduuc hoosaadka sida “caawinta ilmaha,” “furniinka,” ama “khilaafka qoyska” ee liiska dhanka midig.
Su’aalaha hoos ku xusan, waxaad sidoo kale ka heli kartaa liiska jumlado sida “da’da ka hoosaysa 21,” ama “ dadka naafada ah.” Ama “ guri la’aanta ah.” Haddii aad aragtid jumlad taasoo ku sheegaysa, riix bokiska ku xiga. Haddii ayna jirin, iska riix batoonka mar kasta oo diyaar aad u tahay.
Tani waxay kuu soo bandhigi doontaa liiska xafiisyada kaalmada sharci iyo ururada bulsho ee bixiya adeegyada aad u baahantahay ee wadankaaga. Riix magac kasta ee liiska xog ku saabsan sida aad ula soo xidhiidhaysid.
Sideen u heli xog sharci?
Wabsaydkan waxaa loogu tala galay inuu fududeeyo si loo helo xogta sharci ee guud. Marka ugu horaysa eed gashid bogga hore, waxaad arki doontaa qaybo ay ku qoranyihiin mawduucyo sharci, sida
“Adeeg helaha,” iyo “Naafada.” Gabi ahaan waxaa jira 19 mawduuc, waxaadna wadwadi doontaa bogga si aad u aragtid dhamaantood.
Marka aad heshid mawduuca kaasoo si wanaagsan uga hadlaya dhibaatadaada sharci, riix asaga. Tani waxay kuu wadi doontaa liiska “mawduuc hoosaadka” kaasoo aad u sheegaya dhibaatadaada sharci. Sidaa awgeed, tusaale ahaan, haddii sharci ahaan lagaaga saaray guri, waxaad bilaabi:
· Riixidda mawduuca “Guryaha”, ka dib
· Riixidda erayga “Guri ka saarid” ee qaybta mawduucyo hoosaadka.
Tani waxay kuu wadi liiska qoraalo la daabici karo iyo wabsaydyada. Riix ciwaano kasta xog dheeri ah oo ku saabsan xuquuqahaaga.
Sideen u adeegsadaa qaybta “Raadinta”?
Waxaad sidoo kale heli kartaa xog adigoo adeegsanaya “Raadinta.” Qaybta raadinta waxay kutaalaa bokiska baluuga iftiimaya ee dhanka midig ee sare ee bogga hore. Si loo adeegsado raadinta, ku qor erayo dhawr ah oo sheegaya xogta aad u baahantahay, oo riix batoonka.
Tani waxay soo bandhigi qoraalo dhawr ah oo la xidhiidha raadintaada. Haddii aadan helin wax natiijo ah, ku day mar kale erayo kooban, oo hubi erayadu inay saxanyihiin. Waliba waxay kaa caawin in la adeegsado xarfaha farta yaryar (tusaale: “furniinka” meeshii laga qori lahaa “Furniinka”) iyo in laga hortago adeegsiga shaqalka. Tilmaamo badan oo raadinta ah, halkan riix.
Waxaa jira dhawr qaab oo kala duwan taasoo urur ku bixin karo caawin:
· Wakiilnimo Buuxda – qareen ama garyaqaan sharci maxkamadda ama dhagaysiga hay’ad dawladeed.
· Talo Bixin Kooban –shakhsi ahaan ama taleefoon.
· Xafiisyada Sharci – meesha aad kula hadli karto qareen wax ku saabsan dhibaatadaada sharci.
· Xafiisyada Dacwad Oogidda – meesha lagugu tusi karo “is-caawin shakhsi” oo leh dhibaato sharci.
· Is-caawin Shakhsi – samaanka waxbarasho sida waraaqaha iyo war-baahis.
· Wax-kale – sibinaaro, gudbinta qareeno khaas ah, iyo adeegyo kale.
Ogaw: Dhamaan ururadu ma bixiyaan dhamaan adeegyada qoran.
Ururada qaarkood uma shaqeeyaan dadka dakhligoodu ka sareeyo nidaamyadooda. LawHelpMN.org ma damaanad qaado caawinta ururada xataa haddii aad waafaqdid nidaamyada dakhliga.
Ururada kaalmada sharci oo badan waxay adeegsadaan boqolkiiba Federal Poverty Guidelines (Nidaamyada Dhaqaalo-xumida Fadaraalka) si loo go’aansado qofka heli kara caawin. Sidoo kale hantida waxay saamayn u qalmidda adeegyada waxaana loo go’aansan kiis kiis barnaamij kasta oo adeegyada sharci ah.
Ururada qaarkood waxay samayn karaan wax ka dhaafid dadka waawayn ama dadka ay la soo darseen khilaafyo qoys. Sidoo kale, ururada qaarkood waxay dhabarka saartaan kharashaadka sida daryeelka ilmaha, biilasha dawada iyo daymaha.
Kooxaha Gaarka ah
Ururada qaarkood/mashruucyo kali ah ayaa u adeega kooxo gaar ah sida:
· Dadka waawayn
· Shakhsiyaadka naafada ah
· Dadka ay la soo daristay khilaaf qoys